Autoimmune Hepatatis (မိမိကိုယ်ခံအားကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Autoimmune Hepatatis (မိမိကိုယ်ခံအားကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Autoimmune Hepatatis (မိမိကိုယ်ခံအားကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း)
Autoimmune Hepatatis (မိမိကိုယ်ခံအားကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
မိမိခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ဟာ အသည်းဆဲလ်တွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို အတိအကျ မသိရသေးပေမယ့် မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတွေက ဖြစ်ပွားစေတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
မကုသဘဲ နေသွားရင် အသည်းခြောက်ပြီး အသည်းပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စောစီးစွာ သိရှိထားပြီး ကိုယ်ခံအားကိုနှိမ့်ပေးတဲ့ဆေးတွေနဲ့ ကုသရင် အသည်းရောင်ခြင်းပြသနာကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
Autoimmune Hepatatis (မိမိကိုယ်ခံအားကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
မိသားစုတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
Autoimmune Hepatatis (မိမိကိုယ်ခံအားကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လက္ခဏာတွေဟာ သာမန်လောက်ကနေ ဆိုးရွားတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အစောပိုင်းမှာ လက္ခဏာတွေ မပြနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ လက္ခဏာတွေ ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီး ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။
သည်းခြေဓါတ်များ စုဝေးလာ၍ ယားယံခြင်း
Autoimmune Hepatatis (မိမိကိုယ်ခံအားကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ကိုယ်ခန္ဓါရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယား စတဲ့ရောဂါပိုးတွေကို တိုက်ရမယ့်အစား အသည်းဆဲလ်တွေကို တိုက်ခိုက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါ အသည်းဆဲလ်တွေ ရောင်ရမ်းပြီး အသည်းကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို မသိရပေမယ့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ထိန်းချုပ်တဲ့ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ၊ ဆေးဝါးတွေကို ထိတွေ့မှုကြောင့်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
ဒယနေ့မြှတော့ ကိုယ်ခံအားကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်းကို ၂မျိုး သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားကြောင့်အသည်းရောင်ခြင်း အမျိုးအစား (၁)။ တွေ့ရအများဆုံး အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အသက်အရွယ်မဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးအစား (၁) ဖြစ်သူများရဲ့ တဝက်လောက်ဟာ ကိုယ်ခံအားနဲ့ဆိုင်တဲ့ တခြားရောဂါတွေ ဥပမာ celiac ရောဂါ၊ လေးဘက်နာအဆစ်ရောင်ခြင်း၊ အူအနာဖြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း စတာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားကြောင့်အသည်းရောင်ခြင်း အမျိုးအစား (၂)။ ကလေးတွေ ငယ်ရွယ်သူတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရပေမယ့် အရွယ်ရောက်သူတွေမှာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ တခြား ကိုယ်ခံအားနဲ့ ဆိုင်တဲ့ပြသနာတွေ ရှိပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Autoimmune Hepatatis (မိမိကိုယ်ခံအားကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ဖူးခြင်း
ဆေးဝါးအချို့ ဥပမာ minocycline သုံးစွဲနေရခြင်း
ကိုယ်ခံအားနဲ့ဆိုင်တဲ့ တခြားရောဂါတွေဟာလည်း အသည်းကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပြီး ကိုယ်ခံအားတိုက်ခိုက်လို့ အသည်းရောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါရောဂါတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချို အမျိုးအစား (၁)
Autoimmune Hepatatis (မိမိကိုယ်ခံအားကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဒီရောဂါရှိတယ်လို့ သံသယရှိရင် စမ်းသပ်မှုတွေ အသေးစိတ်ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါ စမ်းသပ်မှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
သွေးစစ်ခြင်း။ ခုခံပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ သွေးနမူနာယူပြီး စစ်ဆေးရင် ကိုယ်ခံအားကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်းလား၊ ဆင်တူတဲ့ တခြားလက္ခဏာတွေလားဆိုတာ ခွဲနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါအမျိုးအစားကိုလည်း သိနိုင်ပါတယ်။
အသည်းမှ အသားစယူစစ်ဆေးခြင်း။ အသားစယူ စစ်ဆေးခြင်းဟာ ရောဂါကို အတည်ပြုနိုင်ပြီး အသည်းပျက်စီးမှု အခြေအနေကို သိနိုင်စေပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ အပ်နဲ့ အရေပြားကတဆင့် အသည်းထဲ ထိုးသွင်းပြီး အသားစယူပြီး ဓါတ်ခွဲခန်းကိုပို့ကာ စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ အသားစယူတဲ့အခါ နေရာသိရအောင် အာထရာဆောင်းကို အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။
Autoimmune Hepatatis (မိမိကိုယ်ခံအားကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုဟာ အသည်းပျက်စီးမှုကို နှေးကွေး၊ ရပ်တန့်ပြီး တခါတရံမှာ ပြန်ကောင်းနိုင်ပါတယ်။
ဆေးဝါးကုသခြင်း။ ကိုယ်ခံအားကို နှိမ့်ပေးတဲ့ ဆေးတွေဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ်က တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ 6-mercaptopurine နဲ့ azathioprine စတဲ့ဆေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီဆေးတွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓါရဲ့ တခြားရောဂါပိုးတွေကို တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းလည်း ကျဆင်းစေပါတယ်။
ခွဲစိတ်ခြင်း။ အသည်းအစားထိုး ကုသနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသည်းအစားထိုးပြီးရင်တောင် ရောဂါပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသည်းအစားထိုးပြီး တနှစ်ရှင်နိုင်ခြေ ၉၀%ရှိပြီး ၅နှစ်ရှင်နိုင်ခြေ ၇၀-၈၀%ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက မိမိကိုယ်ခံအားကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်းအတွက် အထောက်အကူ ပြုသလဲ
မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကို သိထားခြင်းဟာ ရောဂါကို စောစီးစွာ ကုသနိုင်စေပါတယ်။
Autoimmune hepatitis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/autoimmune-hepatitis/diagnosis-treatment/departments-specialties/orc-20167563 . Accessed December 27, 2016.
Autoimmune hepatitis. http://www.healthline.com/health/autoimmune-hepatitis . Accessed December 27, 2016.
Autoimmune hepatitis. http://www.webmd.com/hepatitis/understanding-hepatitis-prevention . Accessed December 27, 2016.